Nchịkọta Nchọpụta Organic maka 2018: SEO History, Industry, and Trends | Martech Zone
Nyocha njirimara nke ọchụchọ bụ usoro nke na-emetụta ọhụhụ n'ịntanetị nke weebụsaịtị ma ọ bụ ibe weebụ na nsonaazụ a na-akwụghị ụgwọ nke nchọta weebụ, nke a na-akpọ eke, organic, ma ọ bụ nwetara pụta.
Ka anyị leba anya na usoro iheomume nke engines ọchụchọ.
1994 - Altavista nyocha mbu nke oru. Ask.com malitere njikọ njikọ site na ewu ewu.
1995 - Msn.com, Yandex.ru, na Google.com malitere.
2000 - Baidu, onye oru nyocha nyocha nke China.
2004 - Google bidoro Google Suggest.
2009 - Na June 1st Bing ka emepere emepe wee banye na Yahoo n'oge na-adịghị anya.
Kedu ka igwe ọrụ ọchụchọ si arụ ọrụ?
Nchọgharị ọchụchọ na-eji algọridim mgbakọ na mwepụ iji maa saịtị onye ọrụ chọrọ ịhụ. Google, Bing, na Yahoo, nnukwu engines na-enyocha, na-eji ndị a na-akpọ crawlers ịchọta peeji nke maka nchọta ihe ha algorithmic.
Enwere weebụsaịtị ndị na-akwụsị ndị crawler ịga leta ha, a ga-ahapụ weebụsaịtị ndị ahụ na ndeksi ahụ. Ozi nke ndị na-agagharị agagharị na-eji ya rụọ ọrụ mgbe nke ahụ gasịrị.
Kedu ihe bụ usoro?
Dabere na akụkọ ngosi site na seotribunal.com na ecommerce:
39% nke ngụkọta okporo ụzọ zuru ụwa ọnụ sitere na nyocha, nke 35% bụ organic na 4% akwụ ụgwọ ọchụchọ
Otu n’ime nyocha atọ ama ama mere emeela tupu nleta ụlọ ahịa na 43% nke ndị na-azụ ahịa na-eme nyocha n'ịntanetị mgbe ha nọ n'ụlọ ahịa
Ihe ntanetị 93% nke ntanetị na-amalite site na nyocha ọchụchọ, na 50% nke ajụjụ ọchụchọ bụ okwu anọ ma ọ bụ karịa
70-80% nke ndị ọrụ njin ọchụchọ na-eleghara mgbasa ozi akwụ ụgwọ ma na-elekwasị anya naanị na nsonaazụ organic
Gịnị Dị n'Ihu?
Otu n'ime ihe ọmarịcha teknụzụ ọhụụ niile bụ oge ịchọ olu. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya dị ka nke nwere olu, ọ na-enye onye ọrụ ohere iji iwu olu iji chọọ orntanetị ma ọ bụ ụfọdụ ngwaọrụ. Tupu anyị ewebata ụfọdụ eziokwu dị mma gbasara nyocha olu, ka anyị leba anya na obere usoro iheomume gbasara okwu na teknụzụ na otu o si pụta na afọ.
Ihe niile malitere na 1961 site na iwebata IBM Shoebox, nke bụ ihe mbụ na-egosi nyocha okwu nwere ike ịmata mkpụrụ okwu 16 na ọnụọgụ. Nnukwu ọganihu bịara na 1972 mgbe Carnegie Mellon dechara mmemme Harpy nke ghọtara ihe gbasara okwu 1,000. N'ime otu afọ ahụ, anyị hụrụ Texas Instruments weputara kọmputa ya Kwuonụ okwu na Nkwu okwu na 1978.
Dragọn Dictate bụ ngwaahịa izizi okwu maka ndị ahịa. E wepụtara ya n’afọ 1990 ma rere ya $ 6,000. Na 1994, e webatara IBM ViaVoice, na otu afọ mgbe nke a gasịrị Microsoft webatara ngwaọrụ okwu na Windows 95. SRI gbaghaara ngwanrọ nzaghachi okwu mmekọrịta na afọ na-esote.
N’afọ 2001, Microsoft webatara Windows na Office XP iji okwu ya, ma ọ bụ ụdị SAPI nke 5.0. Afọ isii mgbe nke ahụ gasịrị, Microsoft wepụtara Voice Voice Search maka Live Search (Bing).
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, nyocha olu enwetala ebe dị n'etiti injin ọchụchọ ma ndị mmadụ na-ejikwa ya oge niile. A na-atụ anya na site na 2020, 50% nke nyocha niile dị n'ịntanetị ga-abụ nyocha olu Ndepụta ndị a gụnyere sistemụ ọchụchọ olu na softwares emere n'afọ iri gara aga.
2011 - Apple weputara Siri maka iOS.
2012 - Google Ugbu a webatara.
2013 - Microsoft weputara onye enyemaka Cortana.
2014 - Amazon webatara Alexa na Echo maka ndị isi naanị.
2016 - Ewebata Google Assistant dị ka akụkụ nke Allo.
2016 - Homelọ Google malitere.
2016 - Onye nrụpụta China bidoro ikwuputa mgbagha Ding Dong.
2017 - Samsung webatara Bixby.
2017 - Apple webatara HomePod.
2017 - Alibaba weputara onye oka mmuta Genie X1.
Iwebata sọftụwia nyocha ọkaibe kachasị dị ugbu a bụ ọnwa Mee nke afọ a mgbe Google gosipụtara Duplex. Ọ bụ ndọtị nke Google Assistant nke na-enye ya ohere ịme mkparịta ụka sitere n'okike site n'i mimomi olu mmadụ.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa bụ ojiji nke saịtị mkpanaka. A na-eduzi ọtụtụ nyocha ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka na Google na-ewere eziokwu a nke ọma. Ọ na-achọ ka weebụsaịtị niile bụrụ nke nwere mkpanaka ma ọ bụ na ha apụghị na nyocha ahụ.
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ banyere SEO, pịgharịa gaa na ala wee nyochaa infographic ndị a.
Tags: Alibabaekwe kaaltavistaụdị archie ajụjụajụjụọ jeevesBaidubingbixbyCarnegie MellonOnye enyemaka cortanaDictate Iwunwetaramaara x1google assistantGoogle googlegoogle ugbuagoogle +HomePodibm akpụkpọ ụkwụIBM ViaVoicemicroing bingmkpanaka ọchụchọNchọgharị Olu EkwentịMSNochicho obinyocha ọchụchọSamsungehiọnụ ọgụgụ seoseo akụkọọnọdụ seoSiriaOkwu Ngwa mmemmeọnụ ọgụgụọnọdụnyocha oluyahooYandex